Moldova: Fidarohana Mpanao Gazety Nahatonga Resabe Tao Amin’ny Aterineto Momba Ny “Fomba Fiteny “ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2011 7:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Aymara, English
Tafiditra lalina anaty tantara ilay fifandirana, amin'ny maha ampahany amin'ny firenena Romana an'i Moldavia sy taty aoriana, nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, dia nobodoina sy nozanahan'ny Firaisana Sovietika nandritry ny 50 taona teo ho eo. Ny 27 Aogositra 2011 dia hanamarika ny faha 20 taona nahazoany ny fahaleovantenany i Moldavia, nefa ny tsy fifankahazoana nisy teo amin'ny foko Moldavy sy ireo olom-bitsy miteny Rosiana dia mitranga hatrany hatrany mikasika ny resaka fampiasana teny Rosiana.
Tamin'ny fotoana maro, ny solotenan'ireo vitsy an'isa mpiteny Rosiana dia nandà ny hiteny ny fiteny Ofisialy ao amin'ilay firenena [Ny teny ofisialy ao Moldavia dia ny Romana ( antsoina hoe Moldavy ao amin'ny lalampanorenana)] ary mandidy ny mponina ao an-toerana hiteny Rosiana. Tsy teny ofisialy ao Moldavia ny Rosiana, nefa tena tenenina be any amin'ireo foko vitsy an'isa, indrindra indrindra any amin'ny faritra mpisintaka tsy nahazo fankatoavana ao Transnistria ary ny faritra mizaka tenan'i Gagauz Yeri. Ny sangany ara-politika, sahirana amin'ireo ady an-trano misy eo an-toerana, tsy nanàndrana akory ny hanampina ny hantsana noho ilay adim-poko efa nandritra ny taona maro ary koa tsy nandray fepetra momba izany hatreto.
Ny 29 Jolay, Oleg Brega, ilay mpanao gazety avy ao amin'ny Curaj TV dia nisy nanafika tao amin'ny “the Slavonic University” na “Anjerimanontolo Slavy” ao Moldavia, raha nanadihady tranganà mpianatra iray izay tojo olona mikasika ny fangatahany famindràna any aminà Anjerimanontolo hafa. Noho ny fisisihan'ilay mpanao gazety hahazo valinteny avy amin'ny fiadidiana ny Anjerimanontolo, ilay tale mpanantanteraka ao amin'ilay Anjerimanontolo, Andrei Babenco, dia nangataka tamin'ilay mpanao gazety mba hiteny Rosiana. Nilaza ilay mpanao gazety fa mahazo ny teny Rosiana izy, ary nanontany raha afaka ny hiteny Romana i Babenco, ary nilaza ity farany hoe tsy mahay ary tsy te hiteny Romana, ary avy eo, tsy nisy nanampo, nikapoka ilay mpanao gazety sy ny “camera”-ny rehefa nanontany i Brega hoe fa maninona no tsy miteny Romana izy.
Noraketin”i Brega an-tsary sy feo avokoa ny zava-drehetra, ary mbola nitohy ny famonoana azy, raha mbola nanohy namely azy sy nanompa azy ilay tale mpanantanteraka sy ireo mpiara-miasa aminy sady nanao izay hisintonana ny antontan-taratasy teny aminy sy nanao izay hanajanonony ny fangalàna sary sy feo ( daroka ao amin'ny 1:36; 2:30). Mbola voarahona foana hatrany ilay mpanao gazety ary noraràna tsy hiala tao amin'ny faritry ny Anjerimanontolo. Niantso ny Polisy izy, izay nandray an-tànana ny raharaha.
Talohan'ny nilazana ilay vaovao tamin'ireo haino aman-jery mahazatra, ny vondrom-piarahaminin'ny Aterineto dia nikarakara fanentanana tselatra iray tao amin'ny Anjerimanontolo. Ny 1 Aogositra, niaraka tamin'ny fangalàna an-tsary sy sombin-dahatsoratra avy ao amin'ny lalàmpanorenana, tonga tao amin'ny Anjerimanontolo Slavy ireo tanora mafàna fo ary nanomboka nàka sary ilay Anjerimanontolo, ho fampisehoana fiaraha-mizaka amin'ilay mpanao gazety niharan'ny herisetra. Mpandray anjara iray koa no nosamborin'ny iray amin'ireo solontenan'ny Anjerimanontolo nahatsiaro tohina raha ny marina noho ny fahitàny fa nalaina sary izy ireo. Vokany, nosintonin'ny iray tamin'ireo solotenan'ilay anjerimanontolo ny fakàntsarin'ny iray tamin'ireo mpandray anjara. Nlaina indray ny firotsahana an-tsehatry ny polisy.
Oleg Brega, ilay mpanao gazety voadaroka, dia nanaitra ny sain'ny maro hoe aoka tsy atao ho zavatra tokana iantefan'io resaka io ny fizarazaran'ny foko, izay, araka ny heviny, dia raharaha henjana ihany koa amin'ny fanitsakitsahana ny Zon'olombelona. Na izany aza, ny fifanakalozan-dresaka tao amin'ny Aterineto dia niompana betsaka tamin'ny fiteny Rosiana ao amin'ny firenena.
Vitalie Cojocari dia nahatsapa ho natao tsinontsinona. Nanoratra [ro] izy hoe :
Tsapako indray ilay felaka Rosiana tsy mitsitsy misioka eny amin'ny rivotra ary mamely mafy ahy eo amin'ny takolako. Satria tsy i Oleg Brega ihany no novelesin'ilay tale. Ilay ranamana io, izay miandry azy ny fonja, dia namely mafy ireo mpandray anjara miteny Romana avy ao Moldavia, tsy ijerena ny hoe Moldavy na tsia ny fiantson-dry zareo azy.
Nanohy toy izao izy :
Tena sarotra be ny hilaza amin'ny Rosiana avy ao Moldavia hiteny ny fiteninao. Ny andrana toy izany dia ho voasazy mafy. Mila hajaina ny Rosiana, isika koa anie firenena ahitàna foko maro e! Noho izany manana ny zony izy ireo. Kanefa tsy hisy hiresaka momba ny fanetiterena ve izany ? Tsia. Fa nahoana ? Satria raha mangataka amin'ny Rosiana hianatra fiteny Romana ianao, dia “kisoa fasista” no iantsona anao.
Amin'ny lahatsoratra am-bilaogy hafa, io mpanoratra io ihany no nanamafy [ro], tamin'ny fanehoan-keviny tamin'ny resaka hafa ( ny vondrona mahaleotena Gagauz Yeri dia nangataka ny Governemanta Moldavy mba hamoaka taratasim-pifandraisan'izy ireo ho an'ny faritra amin'ny teny Rosiana) :
[…] Iharan'ny faneriterena hanjana indray izany ny fiteny Romana. Toy ny hoe niverina tany alohan'ny taona 89 isika [ny 31 Aogositra 1989, Moldavia niala tamin'ny Alfabeta “Cyrillic” ho amin'ny endri-tsoratra Latina ]. Toe-draharaha sarotra! inona ary no mitranga amin'ity firenena kelintsika ity, eto tsy misy vitsy an'isa toy ny , Rosiana, Gagauz , Jiosy, Okrainiana, Armeniana hiteny ny fitenintsika ? Isika no hiafara ho ny vitsy an'isa indrindra ato anatin'ity firenentsika ity. Aiza no misy tsy mety amintsika, ry rahalahy, no tsy tian'ny olona ny fitenintsika?
Tudor Cojocariu nanambara [ro] fa “ mbola mila alalinina hatrany amin'ny fàkan'ireo karazanà fanarabiana sy herisetra noho ny adim-poko izay mitranga manodidina antsika”:
Ary iza no mahalala hoe karazanà tranga mampalahelo firy no tahaka ny USSR-efa niainana sy [“mpangalatra ambonin'ny lalàna”] no miseho eo anoloantsika ka hodiantsika tsy hita ary isika mandainga fotsiny amin'ny tenantsika hoe hihatsara ny zava-drehetra rahampitso, nefa efa mafantatra koa fa na ny Moldavy Romana maro an'isa, na ny Rosiana vitsy an'isa dia tsy ho lasa lavitra akory. Resaka fahaizana miara-miaina daholo izany ary mazava be fa ny maro an'isa tsy hiara-hiaina amin'ny vitsy an'isa mihitsy , na dia tompon'ny hery aza, tsy afa-po ary feno henatra aza itsy farany, satria nanjary vitsy an'isa izy ireo tamin'ny fotoana nisian'ny ” Ny tanindrazana Sovietika lehibe” hosoka.
Bilaogera hafa iray , Denis Cenusa, nanoratra hoe [ro]:
Tsy asiana fisalasalàna na fanemorana amin'ny firesahana ilay raharaha momba ny fiteny Rosiana, ny fomba hampidirana ny mpiteny Rosiana ho anaty fiarahamonina, ary ny fepetra arahana mba hampahomby sy hampaharitra ny fifandraisana eo amin'ireo fomba fiteny ao anaty fiarahamonina, amin'ny ho avy, dia hahatonga olana goavana ho an'ny Filaminam-pirenena, tafiditra amin'izany ny fizoran'ny Repoblikan'i Moldavia ho ao anatin'ny Vondrona Eraopeana.
“20 taona izay no lasa. MOLDOVA, MIFOHAZA!”, no namehy [ro] ny fampidirana lahatsoratra am-bilaogy iray an'i Andrei Fornea…..
Media tantaninà ONG iray ao Moldavia no nanao fanambaràna izay maneho ny ahiahiny mikasika ilay raharaha tao amin'ny Anjerimanontolo Slavy ary nanasokajy azy io ho zavatra tsy azo ekena ao anaty fiarahamonina demokratika.